Vao Mainka Mihemotra i Etiopia Amin’Izao Fisian’ny Fanamelohana An’I Eskinder Nega Izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2019 13:17 GMT
Ny herinandro lasa teo, taitra mafy ny EFF tamin'ny fandrenesana fa voaheloka higadra valo ambiny folo taona an-tranomaizina i Eskinder Nega, ilay Etiopiana mpanao gazety sady blaogera, noho ilay fanambaràna mivelatra be sy ankapobeny manohitra ny fampihorohorona. Etiopiana hafa maherin'ny an-jatony, misy mpanao gazety sivy, no voaheloka araka io lalàna tsy mazavazava io. Ny volana desambra 2011, Soedoà roa mpanao gazety no voarohirohy ho nanohana asa fampihorohoroana.
Io fiampangàna an'i Nega io dia tena helohin'ny governemantan'i Etazonia sy ny Firenena mikambana, tahaka izany koa ireo fikambanana maro mpiaro zon'olombelona toy ny Human Rights Watch. Miray feo amin'ireo fikambanana ireo izahay hanameloka ny sazy nomena an'i Nega sy ireo blaogera dimy hafa, izay samy miaina an-tsesitany avokoa.
Lasa iray teo aloha Mampidi-doza
Sary avy amin'ny Ethioforum.
Tamin'ny volana Jona, nanipika manokana ny sivana sy ny fanarahamaso nataon'i Ethiopia ny EFF. ny fanakanana tranonkala ka hatramin'ilay Lalàna mifehy ny fanitsakitsahana ny tolotra momba ny fifandraisandavitra izay, ankoatra ny fiarovana ilay mpanome tolotra izay an'ny fanjakana amin'ny fifaninanana amin'ny tolotry ny VOiP, dia natao ihany koa hanasaziana mafy ireo olom-pirenena tsy hampiasa na hanana fitaovam-pifandraisandavitra tsy nahazoana alalana avy amin'ny governemanta.
Io fanamelohana niseho farany io no maneho ny fahavononan'ny governemanta Etiopiana haneritery ny fahalalahana haneho hevitra sy hanana fikambanana. Fomba iray ampiasaina hampanginana ny mpanoratra ny fampiasàna io lalàna mifehy ny asa fampihorohorona io any amin'ny tany hafa, toa an'i Torkia sy Borondia, izay nahitàna mpanao gazety iray hafa voaheloka higadra mandra-pahafaty noho ny lalàna tahaka izany, tamin'ny volana lasa teo.
Ao amin'ilay Lalàna mifehy ny Asa Fampihorohorona ao Etiopia, ny asa fampihorohoroana dia faritana amin'ny ankapobeny hoe olona na fikambanana “mikasa hanapariaka fomba fijery ara-politika, ara-pivavahana, na ara-potokevitra hanoherana ny governemanta, hampitahorana ny vahoaka na ny ampahany amin'ny vahoaka, hanozongozonana na hanapotehana ny rafitra politika, ny lalàna mifehy, ny toekarena na ny sosialin'ny firenena” amin'ny fihetsika maro samy hafa. Ankoatr'izay, na tsy samihafa amin'ilay lalàna momba ny fanohanana ara-pitaovana any Etazonia aza, tafiditra anain'ny famaritana ny “fanomezana fanohanana ny asa fampihorohoroana” ny fanomezana “fahalalana, fahaizana manokana na fanohanana ara-moraly na torohevitra.” Voarara avokoa ihany koa ny “Famporisihana ny asa fampihorohoroana”- izay ahitàna ny fizaràna fanehoankevitra “mety ho azo raisaina ho famporisihana ny asa fampihorohoroana”. Io andinin-dalàna io no ampiasaina matetika anenjehana ireo mpanao gazety.
Rehefa lasa fanagejàna ny fahalalahana ny ady atao amin'ny asa fampihorohoroana
Na manana antony hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana aza i Etiopia, dia tena mitosatosaka mazava amin'io resaka io hoe ahazoan'ny governemanta tombontsoa ny fanohanan'ny avy any ivelany ireo fepetra napetrany hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana. Etazonia fotsiny ohatra no nanome 847 tapitrisa Dolara hanohanana an'i Etiopia ny taona 2011, ny ampahan'ny be tamin'izany no nankany amin'ny fanohanana ny fanofànana tsy mahafaty ho an'ireo miaramila. Teo anelanelan'ny taona 2002 sy 2007, nahazo fanampiana teo amin'ny 20 tapitrisa dolara avy amin'i Etazonia i Etiopia, fanohanana ara-tafika izay niaraka tamin'ny famatsiana ara-pitaovam-piadiana. Ankoatran'ny fanomezana tohana ara-bola, manohana tanteraka an'i Etiopia amin'ny ady amin'ny asa fampihorohoroan'ny al-Shabaab ihany koa i Etazonia.
Nifanindry an-dalana amin'izany, toy ny resaka navoakan'ny WikiLeaks, naneho hevitra ny masoivohon'i Etazonia ao Etiopia mikasika ilay volavolan-dalàna tamin'izany fotoana izany hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana, nosoratana tao amin'ny fanehoankevitra iray nampitondraina ny lohateny hoe “Mitandrema ry Mpanohitra” :
Etiopia dia mpiara-miombona antoka amin'i Etazonia, ary, miaraka amin'ny fisian'ny korontana ao Somalia, dia miatrika horohoro mampididoza avy any Somalia sy ny Sokinosy Arabo. Na ahafahahan'ireo manampahefana araka ny lalàna ao amin'ny GoE miatrika io tahotra io aza ny ATP, dia mampiseho ny mety ho fanjakazakana ny fidadasik'ilay volavolan-dalàna, ny tsy fahampian'ny fiarovana araka ny lalàna ireo olona voapanga ho mpampihorohoro, toy izany koa ny fanasokajian'ny antoko eo amin'ny fitondrana ireo mpanohitra ho mpampihorohoro. Vantany vao afaka atao, hisy lahatsoratra hiresaka momba izay iarahana amin'ireo manampahefana ao amin'ny GoE atsy ho atsy.
Toa miantefa any an-tsofin'ny marenina daholo izay rehetra ezaka atao mba “hanehoana ahiahy” amin'ny governemanta etiopiàna. Mampalahelo, ny fanamelohana maivana voalaza tamin'ireny tranga tany aloha ireny dia mbola be lavitra noho izay nambara tamin'ny an'i Nega. Ny taona 2011, taorian'ny fanamelohana ireo Soedoa roa mpanao gazety, nanambara ilay lefitry ny mpitondra teny, Mark C, fa “[mankato] ny fahefan'ny dingana ara-pitsarana ao Etiopia i Etazonia ary [manaja] ny ahiahy ara-drariny an'ny governemanta Etiopiana mkasika ny asa fampihorohoroana” talohan'ny nilazany fa “zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina demokratika ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety.”
Na fanehoankevitry ny ny departemantam-panjakana momba ny fanamelohana an'i Nega aza tsy tonga hatrany amin'ny resaka fanamelohana, fa fotsiny zara raha fanehoana “ahiahy lalina.”
Nantsoin'ny Human Rights Watch ireo mpiaradia iraisam-pirenena amin'i Etiopia mba hitaky avy hatrany ny hamotsorana an'i Nega sy ireo mpanao gazety maro hafa ary koa ireo mpiandany amin'ny mpanohitra izay enjehina tsy araka ny lalàna, indrindra ny famerenana mandinika ilay lalàna nampiharina ka nahafahana nanagadra azy ireo. Araka ny ampaham-panehoana hevitra tao anatin'ny New Yorker nosoratan'i Charlayne Hunter-Gault — mpikambana ambony ao amin'ny Kaomity Mpiaro ny Mpanao gazety — vao haingana i Etazonia no nametraka ho laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny demokrasia; raha niresaka momba an'i Nega, hoy i Hunter-Gault manamarika : “Io no tranganà sedra goavana iray”
Farany, ilay “paikady vaovao ampiharin'i Etazonia ao Afrika atsimon'i Sahara” dia mahafehy ny fampandrosoana ny demokrasia sy ny fampiroboroboana ny filaminana ary ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fanoherana ireo fikambanana mpampihorohoro. Tokony hitandrina be ihany ny governementa amerikàna ka hanamarina fa tsy hitondra any amin'ny fanagadrana mpanao gazety intsony io ezaka ataony hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana ao amin'ny faritra io.